अब ३ दिनको मौसम ??? मौसमबिदले दिए यस्तो जानकारी!!! कस्तो हुने छ मौसम!! – News Nepali Dainik
अब ३ दिनको मौसम ??? मौसमबिदले दिए यस्तो जानकारी!!! कस्तो हुने छ मौसम!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०२, २०७७ समय: १५:३५:१८
अझै तीन दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने देखिएको छ । दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्र तथा पूर्वी बिहारमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावले अझै तीन दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना रहेको मौसमविद् विभूति पोखरेलले जानकारी दिइन् । “तत्कालै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने रहेको छैन”, मौसमविद् पोखरेलले भनिन् । वर्षा हुने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
Last Updated on: January 15th, 2021 at 3:35 pm